Taattoo eegaluuf tooftaawwan adda addaa jiru:
Deetaa man'eewwan Calc yookiin Barreessaa keessaa irraa irratti hundaa'uun taattoo saagi.
Yommuu deetaan maddaa jijjiiramu taattoowwan kun ofumaan haaromu.
Tuuta deetaa durtiitiin taattoo saagiitii, achii taattoocha sanaaf deetaa dhunfaakee galchuuf qaaqa Gabatee Deetaa fayyadami.
Taattoowwan kun Barreessaa, Toleessaa fi Fakkasaa keessatti uumamuu ni danda'u.
Taattoo Calc yookiin Barreessaa irraa gara galmee birootti garagalchi.
Taattoowwan kun fanyartuuwwan deetaacha yeroo garagalfamaa jiruuti. Yommuu deetaachi maddaa jijjiiramu isaan hin jijjiiramani.
Taattoo wardii Calc keessaa
Keessa hangii man'eecha taattoo kee keessatti dhiyeessuu barbaaddu sana cuqasi.
SajooTaattoo Saagi kamshaa Waaltina irraa cuqaasi.
Masaka Taatoochaa fi durargii taattoo argita.
Taattoocha uumuuf ajajaalee Masaka Taattoo keessaa hordofi.
Taattoo galmee barruu Barreessaa keessaa
Galmee Barreessaa keessaa, gatiiwwan gabatee Barreessaa keessaa irratti hundaa'uun taattoo saaguu ni dandeessa.
Gabaticha Barreessaa keessatti cuqaasi.
Saagi - Wanta - Taattoo fili.
Taattoo gatiiwwan dhuunfaasaa irratti hunndaa'e
Taattoocha irratti lama cuqaasuunii fi achiiMul'annoo - Gabatee Deetaa Taatoo filachuun gatiiwwan deetaa durtii jijjiiruu ni dandeessa.
Title is: Taattoowwan Saagu